अत्यन्तै सान्दर्भिकर सोचनिय बिषय । हामीहरु नचाहीने कामकोलागि यत्ति समय खेर फ्याल्छौं को त्यसमध्य केहि समय मात्रै सकारात्मक कामको लागि लगायो भने पनि केहि परिवर्तन अवश्य नै हुन्थे ।
केही समय पहिला देशक झण्डा फेर्ने कुरा उठेको थियो, जसले देशको मौलिकता नाश गर्ने बाहेक अर्को कुनै फूल नफूलाउने पक्का थियो । तर यो भने देशको गुमेको मौलिकतालाई पून: स्थापित गर्ने बिषय रहेछ ।
यो लेखमा मेरो पूर्ण समर्थन, स्थानिय नाम, पौराणिक वा आधुनिक नै किन नहोस नाम नेपाली नै हुनुपर्छ ।
एकदमै राम्रो अनि सोचनिय विचार!! यसवारे सबै जानकार रहन अत्यावश्यक छ ।
कुरो तर्कपूर्ण छ, तर अब नौबन्धनको नामले सगरमाथा वा एभरेष्टको न्वारान गर्न थालियो भने त बाहिरबाट हैन भित्रबाटै उत्पात हुने पक्का छ । मलाई डर छ , शास्त्रियता, वैदिक र पौराणिक सन्दर्भलाई आधार मान्दा , बाहुनवादी वा हिन्दु अहंकारवादी जालझेलको आरोप आउने पो हो कि ! सगरमाथाको नामकरणमा तिब्बती र सोलुखुम्बु वरपरका जनजाति विशेषत: शेर्पाहरूको अग्राधिकार रहने होला नि , अहिलेको नेपाली राजनीति र समाजनीतिको तौर तरिकाले बुझ्दा। उनीहरूले सगरमाथालाई झो/चोमोलोङ्मा भन्ने गरेकै छन् , विदेशीले एभरेष्ट भनेर बुझ्छन् अनि नेपाली बोल्नेहरूले सगरमाथा पनि भनेकै छौँ भने यो मत्स्य अवतारको पालाको कुरोलाई कसले कति हजम गर्लान अनुमान गर्न अलिक गाह्रो पर्यो मलाई त ! भर्खरै गोपाल किराँतीको अगुवाइमा खुम्बु प्रदेशको उद्गघाटनमा किराँतीले पुराना र हिन्दुवादी मान्यताका सबै कुरा खारेज गर्ने भन्दै , ई्श्वीय सन् लाई मात्र मान्ने र जनजातिञ नाम तर्फ फर्कने कुरा कोकोहोलो हालेको सुनेको पढेको मलाई , शास्त्रियताको आधारमा फर्किन सकिने विषय अलिक पेचिलो लाग्यो ।
बिषय गम्भीर र तार्किक त छदैछ देशभक्तिको माला जप्ने हरुलाई तर सम्यक जी ले भने झैँ सबैलाई आ-आफ्नो राज्य र संस्कारको अधिकार खोज्न दौडीरहेका हामीबीच बर्तमान समयमा यो बिषयले कतिसम्म प्राथमिकता पाउला ?
लेख जानकारीमूलक हुँदाहुँदै पनि यसको आशयसँग सहमत हुन सकिनँ। 'माउण्ट एभरेस्ट' विदेशीका मुखमा झुन्डिएको नाम हो, हामीले त नेपाली नाम 'सगरमाथा' नै भन्ने गरेका छौँ नि। 'माउण्ट एभरेस्ट' नाम जे-जसरी रहन गएको भए पनि अहिले आएर हामीले मात्र चाहेर फेरिने सम्भावना छैन र मलाई त आवश्यक पनि लाग्दैन। जहाँसम्म नेपाली नामको कुरा छ, पुराणहरुमा 'नौबन्धन' वा 'व्योमकूट' जे भनिएको भए पनि वर्षौँदेखी प्रयोगमा आइरहेको 'सगरमाथा' नै मिठो र सहज छैन र? फेरि हामी नेपालीहरु सार नहेरी नामको पछि दौडिरहेको बेला नाम परिवर्तनको यो बहसले राम्रो सन्देश पनि जाँदैन जस्तो लाग्छ है!
लेख सान्दर्भिक र जानकारी मुलक रहेछ ।
फुर्सत भएको बेला http://merasirjanharu.blogspot.com/ यो पनि हेर्नुहोला।
नामकै पछि लाग्नु उपलब्धिमूलक होइन; प्रचलित नाम राख्नु नै उचित हुन्छ । एभरेष्ट राखेर कसैले स्वामिभक्त देखाएपनि के भो र ? बरु यसबाट हामीले शिक्षा लिन सक्नुपर्छ र यस्ता कुराहरूलाई 'पाठ'को रूपमा सँगालेर राख्नुपर्छ ।
निर्मल जी को ब्लग पनि मैले हेरेको छु.. उहा पौराणिक ग्रन्थहरुको अनुसन्धान गरेर आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ... सम्यक जी सधै जस्तै अलिकता व्यंगात्मक जस्तो देखिनुभएको छ तर अहिले पालि सार मा म उहासंग धेरै सहमत छु.. उहाको व्यंग मा बाहेक...
अहिले को अवस्थामा स्थानीय जनतालाइ नै सन्रक्षण् र बिकास मा सहभागी गरौनुपने भएकोले त्यस क्षेत्र मा बसोबास गर्ने हिमाली बासिन्दा शेर्पाहरुकै राय लिनु पो बेस होला कि ?
नौबन्धन या ब्योम्कुट भन्ने त थाहा थिएन तर तिब्तीहरुले चोमालुगं भन्छन भन्ने बारे थाहा थियो। यस्तो अबसर गर्नुभएकोमा निर्मलजीलाइ धेरै धेरै धन्यबाद।
नामै फेर्ने त अब? साच्चैं नेपाली अहिले निकै अस्थिर छ यांहा केही गर्न सक्ने अबस्था छैन। हरेक चिजमा राजनैतिक रंग हालेर कुन कुरा कांहा पुग्छ, कुन कुराको सपोर्ट हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। फेरी सगरमाथा हाम्रो मात्रै पनि होइन। भन्दा त नेपालमै छ भनिन्छ तर चिनको हालीमुली देख्दा सायद चिनले सगरमाथालाइ नेपाल जत्तीकै दाबा गर्छ होला। झन नेपालको चिन या भारतसंग सम्बन्धित केही निर्णय गर्नुपर्यो भने नेपाल सरकारको खुट्टो काम्ने मात्रै होइन थचक्कै बस्ला।
तर हाम्रो पौराणीक कुराको जगेर्ना गर्नुपर्छ। सगरमाथाको पौराणीक नाम प्रकाशमा ल्याउनुभएकोमा निर्मलजीलाइ धन्यबाद। आशा गरौं सगरमाथाका नाममा नौबन्धन र ब्योम्कुट पनि जोडिउन।
म पढेको विश्वबिद्यालयमा हामीले नेपाली विद्धार्थी संगठन को नाम सगरमाथा राखेका थियौं । हामीसंग संगठनको ब्यानर लगयत टिसर्ट पनि थिए । कसैले सगरमाथा के हो भनेर सोधे "माउंट एभरेस्ट" को नेपाली नाम हो भन्थ्यौं । "सगरमाथा" नामको प्रचारकै लागि संगठनलाई त्यसरी चिनाए पनि माउंट एभरेस्टलाई हटाइ हाल्ने हाम्रो सोच थिएन, बरु मिले सम्म दुबैलाइ संगै प्रचलित पर्ने बिचार थियो ।
नाममै केही हानी देखेको छैन मैले हटाइ हाल्नु पर्ने, यदी माउंट एभरेस्ट को सट्टा "चोरहरुको हिमाल" वा अरु केही नै अपमानजनक नाम भएको भए पक्कै हटाउनु पर्थ्यो :D
सगरमाथाको पौराणीक नाम को जानकारी दिनु भएकोमा लेखकलाई धन्यवाद !